Tsangambato ao Cantabria | Vaovao momba ny dia
Tsangambato ao Cantabria
eTraveling | | Toerana fitsangatsanganana, España, General
Andao hankafy ny dia mahaliana amin'ny fizahan-tany ara-kolotsaina ny Cantabria en España. Voalohany indrindra dia tsy maintsy ambarantsika fa faritra tsara tarehy i Cantabria, manan-karena amin'ny tantara ary avy eo tsangambato. Cantabria dia trano ao amin'ny faritaniny andian-dahatsoratra ara-kolotsaina maha-olombelona.
Anisan'ireo tsangambato manan-danja indrindra ahitantsika azy Tilikambo gothic, izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-14. Raha tsy fantatrao, io Gothic Tower XNUMX metatra avo io dia mijanona eo amin'ny monasiteran'ny Fransiskanina malaza.
Andao hihaona amin'ny Museum Altamira ao Santillana del Mar, miorina amin'ny tena lava-bato ao Altamira, izay fantatrao tsara fa marika eoropeanina kanto kanto. Eny, eto isika dia hahita andiana sary nataon'olombelona avy amin'ny Palaeolithic ambony.
Andao isika izao San Vicente de Barquera, tanàna tsara tarehy any Cantabria izay misy fiangonana paroasy an'ny Masina Maria ny anjely izay tempoly gothic nanomboka tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo. Ny tantara dia milaza fa ilay nandidy ny fananganana an'io tsangambato mahafinaritra io dia ny Mpanjaka Alfonso VIII avy any Castile.
Andao handeha any Puebla de Castro Urdiales taloha, izay ahitanao tempoly malaza fantatra amin'ny hoe Fiangonan'i Santa María de la Asunción, izay manasongadina ny endriny gothic manaitra.
En Villa an'ny Comillas mahita tsangambato marobe izahay ary koa trano avo lenta.
Ny iray amin'ireo tsangambato miavaka indrindra dia tsy isalasalana fa “Ny Capricho an'i Gaudí”Izay asa kanto maritrano izay mipetraka eo ambonin'ny Tanàna manodidina an'i Sobrellano, ary araky ny anarany dia nanangana azy ny Catalan Gaudí.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tsangambato ao Cantabria
Aiza no hampiharana ny fitanjahana any Espana?
Ny X-49A, ny fiaramanidina haingana indrindra eto an-tany (Sambo)